‘कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल’ को सरकारी मुड- विचार - कान्तिपुर समाचार
‘कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल’ को सरकारी मुड
चैत्र २२, २०७३ धर्म अधिकारी
दस वर्ष पुरानो सुशासन ऐन– २०६४ मा टेकेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ जबर्जस्ती जारी गरेको छ । शासकका आँखामा शासनै संसार, नियन्त्रण नै व्यवहार भनेजस्तो भएको छ । ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र अभिव्यक्ति सुनिश्चित गर्ने आम सञ्चारको संवैधानिक प्रावधानमा उभिएर सरकारले मिडियालाई हेर्न चाहेन ।
निर्देशिकाको जगबाहेक मिडियाकर्मीले त्यसमा प्रयोग गरिएको भाषाशैली र परिभाषामा विमति देखाएका छन् । त्यसको दुष्प्रयोग हुने भय प्रकट गरेका छन् र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । आफ्ना सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाहरूले सरकारसँंग निर्देशिका फिर्ता गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।
मस्यौदा निर्देशिकामा निर्दिष्ट नियम पालना नगर्ने मिडियालाई निलम्बनसम्म गरिने प्रावधान थियो । जारी गरिएको निर्देशिकामा त्यो प्रावधान हटाइएको छ । तर यो वस्तुत: नियन्त्रणमुखी छ । सरकार ‘कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल’को मुडमा छ भने मिडियाकर्मी स्वनियमन वा कमसेकम सहनियमनको सिद्धान्तमा जोड दिइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार उनीहरूले आफ्नो नियम आफैं बनाउन पाउनुपर्छ वा सरकारले उनीहरूसंँगको सहमतिमा मात्रै त्यस्तो नियम बनाउनुपर्छ । इन्टरनेटलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र छोडिदिने थोरै मुलुकहरूमध्ये नेपाल रहिआएको छ र यस्तो स्वतन्त्रतामा हामी दक्षिण एसियामामै अग्रणी अवस्थामा छौं । प्राविधिक ज्ञान वा क्षमताको कमीले गर्दा नै सही, औपचारिक रूपमा सरकारले इन्टरनेटलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरै छोडिदिएको थियो । दु:खको कुरा यस निर्देशिकाले हाम्रो त्यो सकारात्मक छविलाई धुमिल बनाउने निश्चित छ ।
दफागत रूपमा हेर्दा निर्देशिकाले ‘अनलाइन पत्रकारिता’लाई इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी समाचारमूलक र जानकारीमूलक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने ‘प्राविधिक कार्य’मा सीमित गर्न खोजेको छ । अभिव्यक्ति र सिर्जनशीलता जस्ता पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ । ‘क्युरेसन’ इन्टरनेट प्रकाशनको मौलिक अभ्यास बनिसकेको छ, तर यो कुरा निर्देशिकामा छुटेको छ । सेयर गर्नुलाई प्रकाशन भन्ने कि नभन्ने ? जिम्मेवारी मूल प्रकाशकमा कि सेयर र क्युरेट गर्नेमा ?
‘अनलाइन सञ्चार माध्यम’लाई कानुनी रूपमा स्थापित वा दर्ता भएको इन्टरनेट माध्यमका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । इ–पत्रकारिता गर्न डोमेन सहितको आफ्नै वेबसाइट हुनुपर्ने अभिप्राय: देखिन्छ । तर आजभोलि सोसल मिडियामा पनि ‘एक्ट्स अफ जर्नालिजम’ अर्थात् पत्रकारिताका कृत्य प्रशस्तै पाइन्छन् । पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगिकार गरी सन्देशमूलक वा विषयगत सामग्री सेयर गर्ने फेसबुक र ट्विटर एकाउन्टलाई पनि सरकारसमक्ष दर्ता गर्नुपर्ने हो त ?
इन्टरनेटको भौगोलिक सीमा छैन । नेपाली अनलाइन मिडिया विदेशबाट पनि प्रशस्तै प्रकाशित छन् । ‘दर्ता नभई’ सञ्चालन ‘गर्न नपाइने’ कुरालाई लागु गर्न न्यायिक क्षेत्राधिकारको कठिनाइ अजङ्ग छ । स्वेच्छिक दर्ता गर्नु बेग्लै कुरा हो । इन्टरनेट मिडिया अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नियमन अधिनायकवादी प्रवृत्तिको सूचक हो । दर्ताका लागि पर्न आएको दर्खास्तमा सूचना विभागले ‘आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ’ भनिएको छ । ऐतिहासिक स्मृति ताजै छ– हामीकहाँ ‘जाँचबुझ’ भन्नासाथ सरकारी नियन्त्रण वा दमनको गन्ध आउँछ ।
दर्ता वा नवीकरण गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी र कामदार समेतको विवरण सूचना विभाग र प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । वास्तवमा धेरै त्यस्ता मिडिया एकजना व्यक्ति र कतिपय अवस्थामा ‘सिटिजन जर्नालिस्ट’ वा ‘ब्लगर’को एकल जमर्कोमा पनि चलेका छन् । कार्यशैलीको यो लचकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनलाइन मिडियाको विशेषता हो ।
निर्देशिकाले सूचना विभागबाट अनलाइन पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधिपत्र लिनुपर्छ भनेको छ । तर यस्तो व्यवस्थाले ‘सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना गर्छ । असली लोकतन्त्रको प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रेस प्रतिनिधिपत्र लिनैपर्छ भन्ने छैन । यो पत्रकारको व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो । नेपालको संविधानले निषेधित गरेका कुरा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने स्मरण गराइएको छ । थुप्रै वर्जित बुंँदा छन्, संविधानमा, जस्तै– राष्ट्रियता, अखण्डता र जातजाति बीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, अदालतको अवहेलना गर्ने र अपराध गर्न भड्काउने जस्ता कुरा । चिन्ता तिनको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने हो ।
आफूले प्रकाशित, प्रसारित गरेको सामग्रीप्रति अनलाइन मिडिया पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हो, जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर ‘पूर्णरूपमा’ सम्भव छैन । लेख सामग्रीमा बाह्य स्वतन्त्र लेखकहरूको पनि योगदान हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनुसार कतिपय लेख सामग्रीमा लेखक स्वयम् जिम्मेवार हुन पाउँछ र हुनु पनि पर्छ । प्रकाशित सामग्री सुरक्षित राख्नु अनलाइन सञ्चालकको दायित्व भनी तोकिएको छ । सुरक्षित राख्नसके कति राम्रो हुन्थ्यो । तर क्षणभंगुरता नै इन्टरनेटको विशेषता हो । कतिन्जेल र कसरी राख्ने अलि स्पष्ट भए राम्रो हुन्थ्यो । अध्ययनले देखाएका छन्, कुनै पनि वेब पेजको औसत आयु १०० दिनमात्र हुन्छ । निर्देशिकाको अघिल्लो मस्यौदामा ‘कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म’ सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख थियो, त्यो मेटाइएको छ ।
अनलाइन मिडिया सञ्चालक, सम्पादक र पत्रकारले प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने भनी निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको छ । लोकतान्त्रिक पत्रकारितामा चलिआएको स्वनियमनको सिद्धान्त अनुसार, व्यवसायीहरूले संगठित रूपमा (जस्तो– अनलाइन पत्रकार संगठन) आफ्नै पत्रकार आचारसंहिता लागु गरे पुग्छ, काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहिता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । मिडियाले आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता पालना गरे पनि हुन्छ, तर त्यो स्पष्ट रूपमा पालन हुनुपर्‍यो । अनलाइन पत्रकारहरू आफैले स्वनियमनको निर्णायक कदम चल्नु उत्तम हुनेछ । देशको प्रचलित कानुन मान्नुपर्छ, तर कानुन नै प्रेसमा अंकुश लाउने खालको बनाउँदा त्यस्तो कानुन खारेजीको पक्षपोषण गर्नु पत्रकारिताकै धर्म हो । प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता पालनको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कुरा लेखिएको छ । विडम्बना, काउन्सिल राजनीतिक रूपमा कहिल्यै स्वन्तन्त्र र स्वायत्त हुन सकेन । उसको अनुगमन र निरीक्षण प्रक्रियाबारे थुप्रै जायज प्रश्न अनुत्तरित छन् । काउन्सिलका निर्णयको सम्मान गर्न धेरै व्यवसायी तयार छैनन् । स्वनियमनको सिद्धान्त अनुसार, सरोकारवाला मिडिया स्वयम् र मिडिया प्रयोगकर्ताहरू समेत संलग्न एउटा नयाँ स्वतन्त्र संयन्त्रले अनुगमन र निरीक्षण गर्नु जायज र उत्तम थियो ।
निर्देशिका पालन नगरेमा सरकारी सुविधा रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सुविधाभोगी मिडियाका लागि यो एउटा आकर्षण भए पनि स्वतन्त्र मिडियाका लागि यो सेन्सरसिपको परोक्ष शैली हो, ‘बल्छीमा गड्यौंलो’जस्तै । विदेशबाट प्रकाशित वा प्रसारित हुने अनलाइन मिडियाले नेपालको संविधानले निषेधित गरेका कुरा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइएमा काउन्सिलले ‘सम्बन्धित निकाय’ (सम्भवत: आईएसपी अर्थात् इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी) लाई लेखी त्यस्तो सामग्री नेपालभित्र प्रकाशन तथा प्रसारण हुन नसक्ने गराउने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानबाट आईएसपीलाई सेन्सरसिपको औजार बनाइएका उदाहरण अन्यत्र प्रशस्तै पाइन्छन् । निषेधित सामग्रीको निक्र्योल कसले, कसरी गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छैन । प्रोक्सी सफ्टवेयर प्रयोगबाट रोक्का गरिएको साइट सहजै ‘एक्सेस’ गर्न सकिने हुँदा विदेशबाट प्रकाशित सामग्री पूर्णत: रोक्का गर्न सम्भव पनि छैन । मिडिया प्रयोगकर्ताको गुनासोबारे छानबिन गर्दा काउन्सिलले मागेका सामग्री अनलाइन मिडियाले उप्लब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । तर मिडियाले आफ्नो स्रोतको गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्थामा स्रोतसम्बन्धी जानकारी नदिन पनि सक्छ ।
गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण काम
नेपालमा प्राय: विधान, नीति, निर्देशिका आलोच्य रहिआएका छन् । तिनको निर्माण प्रक्रिया नै ‘कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल’को मनसायबाट सुरु हुन्छ र पर्याप्त तयारी र अध्ययन नै नगरी सरोकारवालाहरूको आलोचना वा सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय रूपमा हतारमा जारी गरिन्छ । यो निर्देशिका पनि अपवाद रहेन । इन्टरनेटको सीमाहीनता र यसको द्रुत परिवर्तन यसका विशेषता भएकोले वैधानिक नियमन असम्भवजस्तै छ । धेरै देशले अनलाइन समाचार माध्ययमलाई नियमन गरेका छैनन् र गर्नेहरूको प्रयास पनि असफल रहेको छ । ती देशले अव्यावहारिक नियम लागु गर्नुभन्दा गोपनीयता, उत्पीडन, शिष्टता, मानहानि जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रचलित कानुनको भरमा इन्टरनेट नियमन गर्ने गरेका छन् । कतिपय देशमा पत्रकार आचारसंहिता नै पर्याप्त मानिन्छ । सोसल मिडिया र अन्तरक्रियात्मक सहभागिताले अब इन्टरनेटमा ‘सेल्फ करेक्सन’ अर्थात् स्वसंशोधनको अवसर प्रशस्तै छ । त्यसैले हालै जारी निर्देशिकालाई संशोधन गर्ने कि खारेज गर्ने, पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।
पारदर्शी र समावेशी ढंगमा सरोकारवालाहरूसंँग संवाद र सम्झौतामा आधारित नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा सरोकारवालाहरू भन्नाले सरकार र अनलाइन मिडियाकर्मी मात्र पर्दैनन् । मिडिया प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण र अन्य बुद्धिजीवीहरूको समेत रायसुझाव लिनु उचित हुन्छ । सरकार र समूह विशेषका कार्यकर्ता बीचको तानातानीमा बनाइने नीति निर्देशिका बृहत समाजका लागि हितकर हुन्छ भन्ने छैन । जेजसो गरे पनि लोकतान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत जानु राम्रो होइन । लोकतन्त्रमा चल्तीको अभ्यास स्वनियमन नै हो । न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।
निर्देशिकाको एउटा गौण उद्देश्य सूचना विभाग समेतलाई सहयोग पुर्‍याउन प्रेस काउन्सिलले जतिसक्दो बढी मिडिया सम्बन्धी सूचना संकलन गर्नु रहेको भान हुन्छ । नियामक संस्थाले नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो, बृहत रूपमा तथ्यांक संकलन र सूचना संकलनको कामका लागि प्राज्ञिक वा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू वा मिडिया उद्योग स्वयम्लाई प्रोत्साहित र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । स्वनियमनको प्रणाली लागु गर्नसके मिडियाले स्वेच्छिक रूपमा तथ्यांक बुझाउने अभ्यास स्थापित गर्न सकिनेछ ।
हाम्रो जस्तो ध्रुवीकृत बहुलवादी मिडिया भएका कुनै पनि देशमा मिडियाको नियमन गर्न सरकार कमजोर देखिएका छन् । राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठी स्वनियमनका लागि अनलाइन मिडियाकर्मी स्वयम् जुट्न ढिला भैसक्यो । आफूलाई चित्तबुझ्दो भाषाशैली र आत्मसम्मानको दस्तावेज आफैं तयार गर्ने नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । यस अघि भएका अनलाइन मिडियाकर्मीका स्वनियमनका प्रयासको समीक्षा पनि हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण मिडिया प्रयोगकर्ता वा जनताभन्दा उत्तम अनुगमनकर्ता वा निरीक्षक अरू कुनै हुन सक्दैन ।
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ ०८:२३
कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा : पेचिलो मुद्दा
चैत्र २२, २०७३ वाई.पी. आचार्य
कान्तिपुरमा चैत १६ गते ‘कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा ?’ समाचार छापियो । यसले नेपाली विद्यालयीय शिक्षाको असली रूपलाई छर्लङ्ग पारिदियो । शैक्षिक प्रणालीलाई चुनौती दियो । शिक्षा प्रणालीको वास्तविकता पढ्दा बालमनोवेत्ताहरूको मन कुँडियो ।
निर्विद्यालयीकरण र गृहविद्यालयका पक्षपातीहरूको मुटु चस्कियो । शिक्षाविदहरूको मथिङ्गलमा करेन्ट लाग्यो । अधिकारकर्मीका निधारबाट पसिना चुहियो ।
२०४६ सालपछि गुणस्तरहीनताको हिलो छ्यापिएका सामुदायिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र अपनत्वविहीनताको फाइदा उठाउँदै निजी शिक्षण संस्था मोटाउँदै गए । निजी भित्रका पनि केही बलियाले पोषण राम्रो पाए । केही निर्धाहरू कुपोषणबाट बच्न संघर्ष गर्दैछन् । बाल अधिकार, बाल संरक्षण र बाल मनोविज्ञानजस्ता सिद्धान्त गुमराहमा परे । यी सिद्धान्तलाई लात मार्दै पाँच वर्षका बच्चाको बुद्धिमत्ता परीक्षण गरियो ।
के हो त सिद्धान्त ?
फ्रोबेल भन्छन्, ‘शिक्षा बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको तर भित्र फक्रिएको वस्तु हो ।’ उनले जर्मनीमा सञ्चालित परम्परागत शिक्षाले बालकको न्याय नगरेको, समाज र परिवारको मान्यता बच्चाको दिमागमा लादिएको भनी आलोचना गरे । सन् १८१७ मा किन्डरगार्टेन विधिको अवधारणा अगाडि सारे । यस विधिअनुसार बालबालिकालाई पढाउनेभन्दा खेलाउने, रमाउन दिने र रुचि अनुसारका क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउन दिने गर्नुपर्छ । १८९७ मा मेरिया मन्टेश्वरीले रोम विश्वविद्यालयमा मन्टेश्वरी विधिको परीक्षण गरिन् । उनले १९०७ मा आफ्नो पहिलो मन्टेश्वरी कक्षा नै सञ्चालन गरिन् । यस विधिले पनि बालबच्चालाई खेलाउने, नचाउने, घुमाउने गरी स्वतन्त्रतापूर्वक सिक्न दिनुपर्छ भन्छ । हाम्रा विद्यालयहरूमा पनि मन्टेश्वरी र किन्डरगार्टेन भनी नामकरण गरिएका छन् । यिनै विधि अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारको पाङ्ग्रो भने उल्टो घुम्दैछ । यहाँ यस्ता स्कुलमा किताब घोकाइन्छ, गृहकार्यको भारी बोकाइन्छ । परीक्षा लिएर श्रेणी छुट्टाइन्छ । प्रतिष्ठित विद्यालयमा भर्ना पाउने भनेर कलिलो मस्तिष्कमा दबाबको सुई लगाइन्छ । कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा यसैको प्रतिविम्ब हो ।
के भन्छन् हाम्रा विधान ?
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक बनायो । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्यो । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भन्यो । दिगो विकास लक्ष्यको धारा चारले समावेशिता, समता र गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्‍यो । यसमा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । २०६७ सालमा नेपाल सरकारले बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप ल्यायो । यसले बालबालिकाको आफ्नो गति र क्षमताअनुसार रमाइलोसँंग सिक्ने वातावरण भएको विद्यालय बालमैत्री विद्यालय हो भन्यो । प्रारूप अनुसार विद्यालयमा बालबालिकाको अन्तरनिहित क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन । जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताका आधारमा विना भेदभाव विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ ले कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्छ । यो व्यवस्था अनुसार अन्तिम परीक्षा लिएर बच्चालाई उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउन पाइँदैन । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ ले उपत्यकाभित्र कक्षा १ देखि ५ सम्म १२ किलोमिटरसम्म मात्र बच्चालाई गाडीमा स्कुल लैजान मिल्ने भन्छ । तर व्यवहारमा कपट देखिँदैछ ।
अवतरण के ?
हामीले मौलिक हकलाई स्थापित गर्नु पर्नेछ । गुणस्तर भर्नु पर्नेछ । यसका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ ।
१) कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत विद्यालयले समेत कढाइसाथ पालना गर्नुपर्छ ।
२) मन्टेश्वरी किन्डरगार्टेन, नर्सरी कक्षामा सैद्धान्तिक मर्मअनुसार सिकाउनुपर्छ, किताब पढाउन बन्द गर्नुपर्छ, परीक्षा लिएर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउन बन्द गराउनुपर्छ ।
३) तल्ला कक्षामा बच्चाबच्चीले आफ्नो रुचिअनुसार क्रियाकलाप गर्न पाउनुपर्छ । शिक्षकले त्यसको अवलोकन गर्ने हो । पछि बच्चाको रुचि पत्ता लगाई विषय छनोट गर्न सल्लाह दिने हो ।
४) आधारभूत तहमा प्रवेश परीक्षा लिने कार्य बन्द गर्ने कानुनी बाटो तय गर्नुपर्छ ।
५) गृहकार्य होइन, व्यावहारिक कार्य दिनुपर्छ ।
६) अभिभावक पनि किताब घोकाउँदा, गृहकार्यको भारी बोकाउँदा मख्ख पर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ र व्यवहार कुशल सीप घरमै सिकाउनुपर्छ ।
७) तल्लो तहदेखि नै लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्नुपर्छ ।
८) बहुप्रविधियुक्त व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिनुपर्छ ।
९) मानिसको बुद्धि कुनै पनि साधनले नाप्न सकिँदैन । यो सापेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।
अंक प्राप्त गर्न बच्चालाई दबाब दिँदा उसको प्रतिभा दबिन्छ र मर्छ । कथित प्रवेश परीक्षाको हाउगुजी देखाएर कलिला मुना निमोठ्ने काम नगरौं । संविधान, कानुन, मान्यता र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरौं । जोन हाल्टले भनेजस्तो विद्यालयलाई जेल नबनाऔं, घरजस्तै बनाऔं ।